Ụbọchị My Pet » Gwa gị Ịhụnanya gị enweghị Words
emelitere ikpeazụ: Oct. 15 2020 | 2 min agụ
Oke sị na ọ kasị mma mgbe ha kwuru, “More karịa okwu bụ ihe niile ị ga-eme iji mee ka ọ ezigbo. Mgbe ahụ ị ga-enweghị na-ekwu na ị hụrụ m n'anya. Cos m ga-ama.” ha nnukwu hit si '80, Karịa Words. Na na bụ ụdị nke kacha na anyị nile na-atụ anya. E nwere ọtụtụ ụzọ na-egosi onye otú ị na-eche nke na-anaghị achọ iji okwu dị ka ngwá ọrụ. A bụ ụzọ ise ịgwa na onye pụrụ iche kpọmkwem otú ị na-eche:
Ọ Dị Mma, otú nyochawa ya nwere ike-atụle a nta cheat n'ihi lyrics bụ okwu ma ọ bụ okwu. E nwere ọtụtụ ndị mara mma songs ịhọrọ site na gụnyere Bryan Adams’ Heaven, Cyndi Chiefs si Time Mgbe Time na Alanis Morissette si Head karịrị ụkwụ dabere na ozi ị na-agbalị ka izipu. Dị nnọọ arapara na ndekọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-agụ egwú a ma ọ bụ / na egwú gịnị mere na-enye ya a na-aga serenading gị hụrụ? Ọ na-agbakwụnye ihe na-aka.
Okooko osisi & Onyinye
Okooko osisi na-akwa ụzọ na-egosipụta ịhụnanya gị na-enweghị n'ezie sị na ọ. Ya mere hụ na ị maara ịhụnanya gị si mmasị ifuru na-aga n'ebe ahụ. Ma ọ bụ Nhọrọ-aga n'ihi na ihe ha na-amasị ma ọ bụrụ na ha na-adịghị n'ime omenala okooko osisi dị ka senti / aftershave, techaa, akwụkwọ, DVD, wdg … Na-egosi na ị maara ihe ha na-amasị-egosi ịhụnanya gị maka a n'ihi na ị na-ege ha ntị ma na ị na-echeta ihe ha na-amasị. Ndị mmadụ na-achọpụta ihe ndị a ọbụna ma ọ bụrụ na ha adịghị ekwu ihe ọ bụla.
Ka ha Control Of The Ime Control
Ikwe ịhụnanya gị akara nke ime akara kama na-ewere ya mgbe niile bụ a ụtọ na ụzọ aghụghọ nke na-egosi na ị hụrụ ha. Ka emechara, nye elu ọkacha mmasị gị show ya nwere ịbụ ịhụnanya, ọ bụghị ya?!
Ọ bụrụ na ị na-okike eke a ihunanya foto gị na ịhụnanya nwere ike ịbụ a n'ezie ihunanya echiche. Ma ọ bụ ọzọ mma echiche na-na-a foto nke ị ma gosikwa na-ewetara ịhụnanya nke ndụ gị.
Bugharịa na na / alụ ha
Ọfọn e nweghị ụzọ ka mma karịa egosi ịhụnanya gị maka onye karịa ayak ha! Ya mere ọ bụrụ na ị dị njikere na ị na-eche na ha nwere ike ịbụ kwa, ihe ị na-eche maka?!